> Electronics>DeLonghi ICM 14011.(White) (Drip Coffee Machine)
Reference ICM 14011.White
DeLonghi Coffee Maker ICM 14011 can make the prefer life for all coffee lovers. This appliance can be used with every ground coffee you prefer. Make your life and your family life happier and easier with the best coffee everyday.
အလွယ်တကူကော်ဖီနှပ်ပေးနိုင်သောစနစ်ပါဝင်ခြင်း။ အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း။ လှပသောအရောင်နှင့်ဒီဇိုင်းရှိခြင်း။
ကော်ဖီနှစ်သက်သူတို့၏ ဘ၀ကို ပြီးပြည့်စုံစေရန် De'Longhi မှ ထုတ်လုပ်သောကော်ဖီစက်များကို ရွေးချယ် အသုံးပြုကြည့်စေချင်ပါသည်။ De'Longhi ၏ ICM 14011 ကော်ဖီစက်သည်ကော်ဖီချစ်သူများအတွက် အချိန်ကုန်သက်သာကာ လူမပင်ပန်းဘဲ နေ့စဉ်ဘ၀ကို အကောင်းဆုံး ကော်ဖီများ သောက်သုံးရင်း ပိုမို စိတ်ချမ်းမြေ့ ပျော်ရွှင်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။